Norwey Oo Soobandhigtay Ninkii Isku Qarxiyay Bullo Burde 18mars 2014+ video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Norwey Oo Soobandhigtay Ninkii Isku Qarxiyay Bullo Burde 18mars 2014+ video
Al-Shabaab ayaa baahisay nin Soomaali Norway odayna ahaa inuu ka mid ahaa kooxihii fuliyay weerarkii lagu qaaday degmada Buulo Burde.
Idaacada Andulus oo ku hadasha afka Shabaab ayaa sii deysay codka ninkan oo da’diisa lagu sheegay 60-sano jir ka soo hijrooday dalka Norway muddo 13sano ahna kunoolaa .
Ninkan oo lagu magaacabay Cabdullaahi Axmed Cabdulle oo loo yaqaanay Xabiibul Muhaajir, waxaana uu ka mid ahaa ragii fuliyay weerarkii lagu qaaday Hotel Camalow Buulo burde, iyadoo kooxihii weerarkaas fuliyay isugu jiray kuwo is qarxiyay iyo kuwo hubeysan oo xoog ku galay markii qaraxa dhacay.
Wareysiga ninkan lala yeeshay oo cod ahaa ayaa waxaa laga qaaday ka hor inta aanu fulin weerarka, isagoo tix gabay ku cabirayay jihaadka kuna guubaabinayay dhalinyarada inay sii wadaan weerarada.
qasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaa la sheegay in dad ku dhow 20 ruux ay ku dhinteen oo ay ku jiraan mas’uuliyiin, ay kamid yihiin Abaanduulihii Ciidamada DF ee gobolka Hiiraan Col. Maxamed Aadan Amiin iyo ku xigeenkiisii, waxaa sidoo kale ku dhintay gudoomiyahii Degmada Buulo-burte C/qaadir Nuur iyo xubno kale oo ka mid ah Maamulka Gobolka Hiiraan.
Qaraxa ismiidaaminta kadib ayaa waxaa dhacay iska hor imaad toos ah oo rag hubeysan ay hotelka ku qaadeen kadib qaraxa, waxaana la soo sheegay in dadka dhintay inuu ku jiray nin turjubaan u ahaa Ciidamada AMISOM.
Weerarkaas ayaa lagu soo beegay, xilli saq dhexe ah oo ay ciidamada iyo saraakiisha ay hurdayeen, iyadoo gaari oo la sheegay in xowli ku socday in markii hore rasaas lagu riday.
Weerarkaas ayaa ahaa kii uga horeeyay noociisa oo lagu qaado Buulo Burde, tan iyo markii Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM lawareegeen.
HALKAN KA AQRI SI AAD WAXBADAN U OGAATID